राष्ट्रिय जनगणना–२०७८ मा सक्रियताका साथ सहभागी हुन आफ्नो समूदायलाई राष्ट्रिय ख्रीष्टियन महासंघ नेपालको आह्वान « रिपोर्टर्स नेपाल
राष्ट्रिय जनगणना–२०७८ मा सक्रियताका साथ सहभागी हुन आफ्नो समूदायलाई राष्ट्रिय ख्रीष्टियन महासंघ नेपालको आह्वान
प्रकाशित मिति : २७ कार्तिक २०७८, शनिबार
काठमाडौं, २७ कार्तिक । राष्ट्रिय ख्रीष्टियन महासंघ नेपालले राष्ट्रिय जनगणना २०७८ मा सक्रियताका साथ सहभागी हुन आफ्नो समूदायका नागरिकलाई अपिल गरेको छ । आज (शनिबार) रिपोर्टर्स क्लब नेपालमा ‘राष्ट्रिय जनगणना २०७८ सम्बन्धी बृहत्त सचेतना अन्तरक्रिया’ कार्यक्रमको आयोजना गर्दै महासंघले यस्तो भनेको हो ।
कार्यक्रममा बोल्दै राष्ट्रिय ख्रीष्टियन महासंघका अध्यक्ष सिबी गहतराजले नेपालका सम्पूर्ण ख्रीष्टियनहरुलाई यस जनगणनामा ख्रीष्टियन भनेर ५ नम्बरमा टिक लगाउन आग्रह अपिल गरेका छन् । उनले भने,‘यो जनगणनालाई सफल बनाउन ख्रीष्टियन समुदायलाई आग्रह गर्न चाहन्छु । हामी सबै मिलेर यसलाई सफल पार्छौ तर, आस्था र धर्ममा यहाँ ठुलो चलखेल हुँदैछ । खबरदार यसो गरियो भने हामीलाई यो जनगणना स्विकार्य हँुदैन् । सबै धार्मीक समुदायको भावनालाई गणकले सम्मान गर्नुपर्छ । पेन्सिलको प्रयोग गर्नुहुँदैन् ।’
उनले अहिले कोही कोही व्यक्तिहरु हिन्दुको प्रतिशत ९० बनाउँछु भनेर लागेको पनि सुनाए । उनले भने,‘खबरदार कागजमा जुनसुकै बनाउनुहोस, हाम्रो धर्ममा कति मान्छे छन् भन्ने कुरा हामीलाई पनि थाहा छ । यदि त्यसो भयो भने हामीले आफैले गणना गर्छौं ।’
नेपाली ख्रीष्टियन समुदाय र चर्चका लिडरहरुलाई उनले यो जनगणनाको बेलामा टोलटोलमा पहरेदार भएर बस्न पनि अपिल गरेका छन् । उनले भने,‘यदि खीष्टियन लेखिएको ठाउँमा अन्य लेखियो भने राष्ट्रिय ख्रीष्टियन महासंघमा खबर गर्नुहोस । त्यसको लागि के गर्नुपर्छ हामी गर्नेछौं ।’
नेपाली ख्रीष्टियन समाजको स्थिति २०२१ परियोजनाको प्रमुख धनराज घिमिरेले पनि आफ्नो धारणा राखेका थिए । उनले नेपाल सरकारले सुरु गरेको राष्ट्रिय जनगणना २०७८ सबैका लागि महत्वपूर्ण रहेको सुनाए । उनले नेपालमा अनौपचारिक रुपमा हेर्दा करिब ३० लाखको हाराहारीमा ख्रीष्टियन रहेको तथ्यांक सुनाए । उनले भने,‘अहिले देशभरि १२ हजार चर्च रहेका छन् । यद्दपी यसको यकिन तथ्याङ हामीले लिन सकिरहेका छैनौं ।’
नेपाली ख्रीष्टियन समूदायलाई बिभिन्न तत्वहरुले अपमानित गरिरहेको अवस्था पनि उनले सुनाए । उनले भने,‘राज्यबाट पाउनुपर्ने अधिकारबाट पनि बन्चित गरिएको छ । सरकारी कार्यलयमा हामी ख्रीष्टियन हौं भन्दा त्यहाँपनि अपहेलना गरिने गरिएको हामीले महसुस गरेका छौं । त्यसैले सरकारले सबै धर्मलाई समान ढंगले हेर्नुपर्छ । यो नै नेपाली ख्रीष्टियन समूदायको माग हो ।’
उनले राष्ट्रिय जनगणना २०७८ आफूहरुको लागि निकै महत्वपूर्ण रहेको सुनाए । यसअघि २०६८ को जनगणनामा नेपाली ख्रीष्टियन समूदायको संख्या एकदम न्यून देखाईएको उनको गुनासो छ । उनले भने,‘त्यो हामीलाई स्विकार्य थिएन र छैन् । कसैको दबाबमा नपरेर जति संख्या रहेको छ त्यति नै तथ्यांकमा उल्लेख गर्न राष्ट्रिय तथ्यांक विभागलाई हाम्रो जोडदार अपिल छ ।’ गणकहरु घरदैलोमा जाँदा ख्रीष्टियन समूदायलाई सतर्क भएर हेर्न पनि उनले आग्रह गरे । उनले भने,‘पेन्सिलले लेखिरहेको भए त्यो गलत हो त्यहाँ पेनले लेख्नको लागि हामी आग्रह गर्दछौं ।’
कार्यक्रममा बोल्दै जनसंख्या विज्ञ प्रा. डा. योगेन्द्र गुरुङले एक अध्ययन सुनाउँदै ख्रीष्टियनमा दलितहरु धेरै रहेको सुनाए । उनले भने,‘ख्रीष्टियनभित्र पनि जात व्यवस्था रहेको छ । बुद्धिजम, मुस्लिममा पनि ठुलो जात र सानो जात भन्ने धेरै नै छ । त्यसैले जबसम्म यो जात व्यावस्थाबाट हामी बाहिर निस्किन सक्दैनौं । यो जनगणनामा पनि त्यसको रिफ्लेक्सन् परेको छ जस्तो मलाई लाग्छ ।’
जनगणना क्रमशः प्रजातान्त्रीक र जनमुखी हुँदै आएको उनले सुनाए । उनले भने,‘१९९१ मा जनगणनामा पहिलोपटक जातजाति उल्लेख गरिएको थियो । यसपटक वडास्तरदेखि नै सञ्चालन गरेको हुँदा र गणकहरु पनि स्थानीस्तरकै भएको हुँदा यसपटकको जनगणना प्रभावकारी हुन्छ । त्यसैले तथ्यांकमा कुनै तलमाथि हुँदैन भन्ने परिकल्पना गरिएको छ । नयाँ संरचनामा पहिलो जनगणना भएको हुँदा यो जनगणनामा समावेशी रहेको छ । यस्तै पहिलोपटक गणनाको इतिहासमा संसारमै कतै नहुने सामूदायिक प्रश्नावली रहेको छ । जुन एउटा वडामा एउटा भरिन्छ यो नौलो विषय हो । यस्तै यसपटक तथ्यांकमा स्तरियता हुन्छ ।’
जनजाती महासघंका पूर्व महासचिव आङ्काजी शेर्पाले जबसम्म खुल्लामञ्चमा दशैंको फुलपातीमा हर्षबढाँई हुने, बाहुनले जनै फेर्दा तोप पड्काउने, हिन्दुको चाडबाडमा १५ दिन विदा दिने तर अरुको चाडबाडमा दिएको एक दिनको विदा पनि कटौति गरिन्छ तबसम्म हिन्दुको तथ्यांक घट्ने अनि मुस्लिम, ख्रिटियन र बुद्धिष्टको जनसंख्या बढ्छ भन्ने दिवा सपना त्याग्न आग्रह गरेका छन् ।
उनले भने,‘यसको कारण के हो भने ८० हजार गणकमा १५ हजार पनि गणक धर्मनिरपेक्ष पक्षधर छैनन् । बाँकी कमल थापा र ज्ञानेन्द्रको हन्डी खाने र भारतको योगी आदित्यनाथको हन्डी खाएर उनीहरुलाई प्रशिक्षण दिएर जसरी भएपनि हिन्दु लेख्नु भनेको छ ।’
अबको जनगणनाले ८६ प्रतिशत हिन्दुको जनसंख्या कायम राख्यो भने सबैले हातमा आगोको मुस्लो लिने र चारै दिशाबाट तथ्यांक विभाग जलाउनुको विकल्प आफूहरुसँग नभएको उनको चेतावनी छ।
ईस्लाम सोसाईटीका अध्यक्ष नजुरेल हुसेनले केही ठाउँमा मान्छेको नाम मात्र लिएर अरु डाटा अफिसमा गएर भर्छु भनेर गणकहरुले लगेको भन्ने सुनिएको उल्लेख गदै आपत्ति जनाए । उनले भने,‘कसैले पेन्सिलले लेखेको भन्ने कुरा सुनिएको छ । यस्तो गर्नु गम्भिर गल्ती हो ।’
उनले अर्को धर्मलाई कम देखाएर आफुहरु ठुलो भनेर अरुलाई सधैं दबाउने अपराधिक मानसिकताबाट निस्किनुपर्ने पनि बताए । उनले भने,‘यस्तो मानसिकता गणकमा नहोस । यस्ता विकृति रोक्न आवश्यक रहेको छ । मानव–मानव बिचमा भेदविवाद रहनु एकदम गलत हो । यसलाई हटाउनुपर्छ । हामीले यो अभियान आफुबाट सुरु गरौं ।’
काँग्रेसमा संस्थापन इतर समूहबाट यी नेताले छान्नेछन् प्रदेश सभापतिको उम्मेदवार
काठमाडौं, १५ मंसिर । नेपाली काँग्रेसको संस्थापनइतर समूहले प्रदेश सभापतिको उम्मेदवार छान्न नेताहरुलाई जिम्मेवारी तोकेको
नेपाली काँग्रेस बागमती प्रदेशको सभापतिको उम्मेदवारी घोषणा गर्दै भीमसेनदास प्रधानले भनेः मलाई देउवा र सिटौलाको साथ छ
काठमाडौं, १५ मंसिर । नेपाली काँग्रेसका सांसद भीमसेनदास प्रधानले बागमती प्रदेश पार्टी सभापतिको उम्मेदवारी घोषणा
‘गुन तिर्छु’ भन्दै प्रचण्डले गरे प्रधानन्यायाधीश जबरालाई महाभियोग लगाउने संकेत
काठमाडौं, १५ मंसिर । नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराविरुद्ध
देउवाको अस्त्र सिटौला
काठमाडौं, १५ मंसिर । नेपाली काँग्रेसको जिल्ला अधिवेशनसम्मको देशभरको अवस्थाले विभिन्न गुट वा उपगुट एक
ईन्द्र बानियाँद्वारा बाग्मती प्रदेशको सभापतिमा उम्मेद्धवारी घोषणा, प्रस्तावक तीर्थ लामा र समर्थकमा दुर्लभ थापा (कसले के भने ?)
काठमाडौं, १५ मंसिर । नेपाली कांग्रेसका बाग्मती प्रदेशका संसदीय दलका नेता तथा पूर्वमन्त्री ईन्द्रबहादुर बानियाँले
आज कोरोनाबाट ३ जनाको मृत्यु
काठमाडौं, १५ मंसिर । पछिल्लो २४ घन्टामा कोरोना संक्रमणबाट आज थप ३ जनाको मृत्यु भएको
आज ३ सय १६ जनामा संक्रमण पुष्टि, २ सय निको
काठमाडौं, १५ मंसिर। आज नेपालमा कोरोना भाइरसका ३ सय १६ जना संक्रमित थपिएका छन् ।
अमेरिकाले दियो ओलीलाई बधाई
काठमाडौं, १५ मंसिर । अमेरिकाले नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई बधाई दिएको छ ।